होटल रोयल नेशनल, लण्डनमा | यात्रा समाचार
रोयल नेश्नल होटल, लन्डन
मारिएला क्यारिल | | आवास, लन्डन
युरोप र सारा विश्वमा सब भन्दा ठूलो शहरहरू मध्ये एक लन्डन हो, त्यसैले होटेल अफर वास्तवमै असंख्य र विविध छ। तर जब यो मामला हुन्छ, सामयिक यात्रीसँग प्राय: एउटा प्रश्न हुन्छ: म कहाँ बुक गर्छु? कुन होटेल राम्रो छ र महँगो छैन? यहाँ लन्डनमा एक तीन सितारा होटल छ, होटल रोयल नेशनल लन्डन.
यो हीथ्रो एयरपोर्टसँग धेरै राम्रो जडानको साथ एक अद्वितीय, हंसमुख होटल हो। एक बार, क्याफेटेरिया र पिज्जामा विशेषज्ञता स्थान पनि थप्नुहोस्। कसरी?
1 शाही राष्ट्रीय होटल
2 होटल नजिकै के हेर्ने
शाही राष्ट्रीय होटल
यो होटल हो तीन वर्ग तारा र यो अंग्रेजी राजधानीको केन्द्रीय छिमेक मध्ये एक हो। १ 1967 XNUMX मा खोलियो र यसले सात कालको चिनियाँ शैलीको भवनमा सञ्चालन गर्दछ, आधुनिक समयको लागि उपयुक्त छ २००। मा पुनर्स्थापित गरियो पूर्ण रूपमा।
यो बेडफोर्ड वेमा अवस्थित छ, ब्लोम्सबरीबाट करिब २ minutes मिनेट पैदल र कारबाट भिक्टोरिया पार्क जान २० बर्ष लाग्छ। यो टोटेनहम कोर्ट रोड ट्यूब स्टेशनको छेउमा छ। कुनै नराम्रो छैन। यो ब्रिटिश संग्रहालयबाट 500०० मिटर र लन्डन विश्वविद्यालयबाट 350 XNUMX० मिटर मात्र रहेको छ।
उनीहरूको सम्बन्धमा आधारभूत लाभ हामीलाई प्रदान गर्दछ कफि पसल, सुविधा स्टोर, र उपहार पसल, एक कपाल, नि: शुल्क इन्टर्नेट, वाइफाइ इन्टर्नेट, एक भुक्तान पार्किंग स्थल र धुम्रपान नहुने कोठा। अलि बढी पढ्दा मैले पत्ता लगाए कि इ England्ल्याण्डमा जस्तो तातो दिनहरू हुँदैन त्यहाँ बेडरूमहरूमा वातानुकूलन छैन, यद्यपि त्यहाँ सामान्य क्षेत्रहरू छन्। केही वर्ष पहिले त्यहाँ तातो लहर थियो र एक मित्र यस बानीबाट ग्रस्त थियो, तर हे, तपाईं गर्मी को बीचमा जानुभयो भने तपाईं गर्मीबाट बच्न सक्नुहुनेछ ...
कोठाको मामलामा, त्यहाँ दुई एकल बेड वा डबल बेडको साथ आधारभूत कोठाहरू छन्, वाइफाइ, टेरेस, सिटिंग क्षेत्र, साझा बाथरूम र मिनीबारको साथ; र एकल प्रयोगको लागि दुई बेडको साथ आधारभूत कोठा। त्यहाँ तीनवटा कोठा पनि छन्। सबै कोठामा सेन्ट्रल हीटिंग, टेलिभिजन र माइक्रोवेभ, चिया र कफी बनाउने सुविधा र मिनीबार छ। अवश्य पनि, यदि तपाईं बाथरूम बाँड्न मनपराउँनुहुन्न भने, बुकि when गर्दा यो याद गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
रोयल नेशनल होटेल लन्डनले एक प्रस्ताव गर्दछ कन्टिनेन्टल ब्रेकफास्ट: खाद्यान्न, फल, रोटी, टोस्ट, कफि, चिया, तर तपाईं सँधै अतिरिक्त भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ र विशिष्टको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ अंग्रेजी खाजा जुन बढी पूर्ण र अद्वितीय हो। Scrambled अण्डा, मशरूम, रगत सॉसेज, टमाटर वा बेक सिमी को बारे मा सोच्नुहोस् ... र तपाईं अधिक तिर्न छैन किनभने तपाईं सडक मा एक क्याफेटेरिया जानु भने मूल्य पक्कै उच्च हुनेछ।
यो पनि बाहिर खाने क्षेत्र छ जहाँ तपाईं खाना खान सक्नुहुन्छ, एक बार र एक रेस्टुरेन्ट जसले प्राय: चिनियाँ खाना सेवा गर्दछ। योसँग पौंडी पोखरी, सॉना, जाकुझी, जिम र सोलारियम पनि छ। स्वागत २ 24 घण्टाले कार्य गर्दछ, त्यहाँ व्हीलचेयरमा जानका लागि सुविधाहरू छन् र यदि तपाईं पालतु पशुहरूको साथ यात्रा गर्नेहरूमध्ये हुनुहुन्छ भने, जबसम्म तपाईं यो विशाल कुकुरसँग गर्नुहुन्न त्यहाँ कुनै समस्या हुँदैन।
अन्यथा यो लन्डनमा बजेट होटल यो मूल रूपमा अरू कुनै होटल प्रदान गर्दछ: सुक्खा सफाई, कम्प्यूटर भाडा, मुद्रा विनिमय, व्यापार केन्द्र र कोठा सेवा। चेक इन दिउँसो २ देखि रात १२ बजे सम्म हुन्छ, र चेकआउट बिहान ११ बजे हुन्छ।
के तपाईमा रुचि छ? शुल्कहरूकम्तिमा पनि एक विचार प्राप्त गर्न? विकल्प खोज्दै म अर्को हप्ता र मिति प्रविष्ट गरीएको छु पाँच रात डबल कोठा बिहानको खाजा सहित यसको मूल्य छ दुई वयस्कका लागि 594 XNUMX युरो। दुई एकल बेड र ब्रेकफास्टको साथ मूल्य 732२ यूरोमा जान्छ र आधा बोर्ड सेवाको साथ (सधै दुई व्यक्तिको लागि, पाँच रातहरू), 871१ यूरो। ट्रिपल कोठाको लागत 997 XNUMX युरो छ।
होटलले मास्टरकार्ड, भिसा र PayPal लाई भुक्तानको रूपमा स्वीकार गर्दछ। विचारहरू? ठीक छ, त्यहाँ सबै छ। अचम्मको आशा नगर्नुहोला, तकिया सफा गर्ने वा आराम गर्ने केहि प्रश्नहरू, तर हामीलाई थाहा छ यो कसरी हुन्छ, हामी सबैले हामी मेलामा कसरी गरिरहेछौं भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं ...
होटल नजिकै के हेर्ने
हामीले माथि भनेझैं होटलको धेरै राम्रो स्थान छ किनभने यो व्यावहारिक रूपमा हो केन्द्रीय लन्डन। वास्तवमा, मलाई लाग्छ यो यो प्रदान गर्दछ को सब भन्दा राम्रो हो। यदि तपाईं धेरै विलासी वा आकर्षक बुटीक होटेलको खोजीमा हुनुहुन्न तर केहि काम गर्दछ र राम्रोसँग अवस्थित छ भने, यो उत्तम विकल्प हो।
तपाईं हिंड्न वा सार्वजनिक यातायात लिन र तपाईं जहाँ चाहानुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रिटिश संग्रहालयको धेरै नजिक छ, विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध र एक उत्तम संग्रहको साथ एक हो, विशेष गरी प्राचीन मिस्रको सन्दर्भमा, तर यसमा ग्रीस, रोम, मध्य पूर्व वा अमेरिकाका चीजहरू छन्। तिनीहरूको संग्रह वास्तवमै अद्भुत छ। आदर्श भ्रमणमा पूरा दिन समर्पित गर्नु हो, त्यसैले नजिक हुनु दुब्लो हो।
तपाईले यो तथ्यलाई फाइदा लिन सक्नुहुन्छ कि होटल नजिकै छ र त्यहाँ स्प्यानिश भाषामा गाईडहरू छन्। संग्रहालय बिहान १० बजे खुल्छ र साँझ 10: .० मा बन्द हुन्छ, त्यसैले यो हेर्नको लागि पहिलो स्थानहरू मध्ये एक हुन सक्छ। अर्कोतर्फ अक्सफोर्ड स्ट्रीट, ई England्ग्ल्याण्डको सब भन्दा रमाईलो र व्यवसायिक सडकहरू मध्ये एक 200 मीटरको साथ सयौं पसल मार्बल आर्चबाट अक्सफोर्ड सर्कस सम्म। जब तपाईं यस हिंड्नुहुन्छ, सोच्नुहोस् कि यसको उत्पत्ति रोमी रोडको हो र यो लन्डनको पुरानो शहरको प्रवेश द्वारको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
यो यहाँ छ, अक्सफोर्ड स्ट्रीटमा, जहाँ सबै भन्दा लोकप्रिय स्टोरहरू Uniqlo, H&M, Benetton, Zara, Adidas, Mango or Topshop जस्ता छन्, केहि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूको नाम लिनका लागि। टोपशपको यहाँ 800०० वर्ग मिटरको सुपर स्टोर छ, उदाहरण को लागी।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो होटेल सरल छ: एक सस्तो तीन-स्टार आवास जसको ठूलो लाभ स्थान हो। यदि तपाईं होटेलहरू बारे वा धेरै बजेट हुनुहुन्न वा तपाईंको बजेटले तपाईंलाई समायोजन गर्न बाध्य पार्छ भने यस ठाउँको लायक छ किनकि यसको उत्कृष्ट स्थान, बेडफोर्ड वे - रसल स्क्वायरमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » लन्डन » रोयल नेश्नल होटल, लन्डन
कसरी ट्राभल एजेन्सी छनौट गर्ने